Naqshad gaar ah iyo raaxada sariirta gogosha leh - Alaabta guriga - dhiirigelin
Naqshad gaar ah iyo raaxada sariirta gogosha leh
2 Maarso, 2019 Febraayo 16, 2021 admin Sariiro laba jibbaaran, Qolalka jiifka casriga ah, Sariiraha, Qolka jiifka
Sariiraha gogosha leh ma aha wax la soo dhaafay. Weli waa caan. Waxaad ogaan doontaa sababta ay xaaladdu sidaas u tahay iyo waxa aad ka fekereyso haddii aad go'aansato inaad iibsato iyaga maqaalka soo socda.
Dabaqyada dharka waa isku xirnaanta isbeddellada moodada ee naqshadeynta gudaha. Tani waxay sidoo kale khuseysaa sariiraha qolka jiifka. Sariiraha labanlaaban ee gogosha leh ayaa qolka jiifka siiya muuqaal soo jiidasho leh. Sariiraha oo dhan ama madaxa kaliya ayaa kor loo saari karaa. Naqshadaha asalka ah ee madaxa ayaa qol kasta ka muuqda. Waxaad ka dooran kartaa moodello kala duwan. Waxaad dooran kartaa sariiro laba jibbaaran oo goglan oo leh madax madax sare leh iyo tolliimo qurxin leh. Ama foodda hoose oo qaab fudud leh. Waxay kuxirantahay dhadhankaaga iyo qalabka guud ee qolka. Waxaad sidoo kale qaddarin doontaa waxqabadka dhabta ah ee foodda sare leh. Gaar ahaan haddii aad jeceshahay inaad wax ku akhrisato sariirta.
Markaad iibsaneyso, hubi tayada dharka maryaha la isticmaalay. Ma aha inay kaliya ku raaxaystaan ​​taabashada, laakiin sidoo kale xoqida u adkeysiga. Faa'iidada waa suurtagalnimada nadiifinta fudud. Awoodda dhismaha ayaa sidoo kale muhiim ah. Qalabka ugu habboon waa qoryo. Sariiraha labanlaabma ee gogosha leh ee qaabdhismeedka alwaax ayaa leh nolol adeeg dheer. Way xoog badan yihiin waana xasilloon yihiin. Faa’iido darradooda ayaa laga yaabaa inay tahay qiimo ka sarreeya. Sariiraha laba-laaban ee gogosha leh oo leh dhismo adag oo la isku qurxiyo ayaa sidoo kale ah xulasho wanaagsan. Faa'iido darrada nolosha adeegga waxyar ka gaabinaysa ayaa lagu dheelitiray qiimahooda hoose.
Moodooyinka, midabada iyo qaababka
Markaad iibsaneyso sariir goglan, waxaad leedahay xulasho moodooyin badan. Waxay ku kala duwan yihiin cabbirka sariirta, nooca alwaaxda loo isticmaalo iyo naqshada. Waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin qaababka dahaadhka. Markaad iibsaneyso, waxaad dooran kartaa isku-dhafka midabada adag. Sariirta noocan oo kale ah waxay noqon doontaa qaybta ugu weyn, taas oo go'aamin doonta jihada inta ka hartay qalabka qolka. Waxa kale oo aad sharad karaa fudud. Sariiro labalaab leh oo gogol leh oo isku dhafan oo ah midabyo midabyo khafiif ah ayaa qolka jiifka siin doona boos dheeraad ah oo loogu talagalay qalab kala duwan.
Waxaad ka heli doontaa xulasho ballaadhan oo sariiro laba-geesood ah oo tayo leh iibiyaha HALKAN.
sariir laba nafar ah iibinta sariiraha laba jibbaaran sariiraha sare
Alaabta guryaha ee rattan
Ku fadhiisiga barxadda